कान्तिपुर टिभीमा ‘आम्मा`मा.. `तीन अर्बमा कति खायो होला !’! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Interesting/कान्तिपुर टिभीमा ‘आम्मा`मा.. `तीन अर्बमा कति खायो होला !’!
कान्तिपुर टिभीमा ‘आम्मा`मा.. `तीन अर्बमा कति खायो होला !’!
कान्तिपुर टेलिभिजनमा आज बिहान समाचार पढ्ने क्रममा एउटा रमाइलो ‘का`ण्ड’ भयो। बिहान सात बजेको समाचा`रमा १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग सकिएको पाँच महिना भइसकेपनि अहिले सम्म कति खर्च भयो भन्ने सार्वजनिक नगरिएको बारे एउटा रिपोर्ट थियो।
रिपोर्ट टेलिभिजनमा बज्दै गर्दा समाचार वाचिका रुबिना थापाको माइक अफ भएनछ। त्यसपछि त रमाइलो भयो नि! पुरुष आवा`जमा रिपोर्टमा भनिँदै थियो- ‘सरका`रले साग सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले तीन अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ दिएको थियो।’
समाचार वाचि`काको मुखबाट निस्कियो, ‘आ`म्मामा`…तीन अर्बमा कति खायो होला त!’ माइक अफ नभए`कोले दर्शकले पनि त्यो आवाज सुन्न पाए। टेलि`भिजनमा प्रत्य`क्ष हेर्न छुटाउनु हुनेका लागि कान्तिपुर टेलिभिजनले आफ्नो युट्युब`मा यो रमाइलो ‘काण्ड’ सम्पादन नगरी राखेको छ।
अपडेट : कान्तिपुर टेलिभिजनले यो भिडियो हटाएको छ। तर यो भिडियो भेटिएको छ। हेर्नुस् भिडियो-
Tin Arba Ma Kati Khayo Hola
Watch Till The End आम्मामा.. तीन अर्बमा कति खायो होला
Gepostet von ????? Studio am Sonntag, 3. Mai 2020
यो ब्लग प्रका`शित भएपछि कान्तिपुर टेलिभि`जनले राति ८ बजेर २७ मिनेटमा ट्विट गरी प्राविधिक गड`बडीका कारण असा`न्दर्भिक आवाज पर्न गएकामा क्षमा मागेको छ।
खुबै सुन्दर ‘ड्रेस’ मा देखिइन् प्रियंका, मूल्य थाहा पाएर पर्नुहुनेछ चकित
जिन्दगी भरि नै धन कमाउन चाहनु हुन्छ भने अब यस्ता धन कमाउने ९ टिप्स
जोगी ढोगी हुन, पैसा र पावर हुनु पर्छ होइन भने जवानी बेचेर मात्र सफल भइन्छ भन्दै पोखिन् यस्तो आ क्रोस (भिडियो)